Web Toolbar by Wibiya Guriga Qoyska & Wanaaga Bulshadda - Articles: Bariiska sida loo sameeyo
Bariiska sida loo sameeyo
WQ:Khadra Maxamed khadra@khadijahome.com Saliida adigu qiyaaso laakiin yaanay kaa yaraanin 2 xabo oo basal ah 4 xabo oo toon ah 1 qado oo xawaash-karii ah iyo nooca kale ee aad jeceshahay oo xawaashyada ah. 2 qaadada cuntada lagu cuno oo maraq diigaag ah Milix ( cusbo ) yar oo aan badnayn maadama aad ku dartay maraq digaag. Sidan isoogu dar:
Marka hore digsiga dabka saaro, markaasna saliid ku shub.
saliidu markay inyar yara kululaato, waxaad ku dartaa basasha, markay isku yara shiilmaan, waxaad ku dartaa toontii oo aad utuntay si fiican. Intaas ka dib waxaad ku dartaa xawaashyada, maraq digaaga iyo milixda.
Markay intaas iskugu kaa shiilmaan waxaad ku shubtaa bariiska inta aad rabto inaad karsato, kadib waxaad ku dartaa biyihii oo kuu karsan, biyuhuna yeyna kaaga badanin si uu kugu noqdo bariis furfuran, dabkana u gaabso.
FG. Hadaad rabto waxaad ku karsan kartaa hilibka maraqiisa oo aad biyo uga dhigan kartaa.
Sawirka lasocda bariisku maaha bariiskan
on March 26 2009 ·
11393 Reads ·
·Noloshaada waa sida aad ka dhigtid fikirkaaga.!!! Q2aad
·Noloshaada waa sida aad ka dhigtid fikirkaaga.!!!
·Sida nafta shaydaanka looga ilaaliyo
Render time: 0.10 seconds - 68 Queries
2,797,655 unique visits